အားကစား Archives •
24/09/2019 Yan Naing 0
အလွယ်ကူဆုံး ဝိတ်ချနည်းများ ခန္ဓာကိုယ် အလေးချိန် ကျစေဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုဟာ အဓိက ကျလှပါတယ်။ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှုဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ကယ်လိုရီကို လောင် ကျွမ်းစေဖို့ ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက်မှု ကောင်းတာကြောင့် အဆီတွေကို လောင်ကျွမ်းစေနိုင်ကာ ခန္ဓာကိုယ်အ လေးအချိန်ကို ထိန်းရာရောက်စေပါ တယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အတွက် ဇီဝရုပ်ဖြစ်ပျက် Continuous reading
အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ မန်ယူအသင်း အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုပွဲစဉ် ( ဟိုက်လိုက် )
20/09/2019 Yan Naing 0
အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ မန်ယူအသင်း အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုပွဲစဉ် ( ဟိုက်လိုက် ) အင်္ဂလန် ကလပ်အသင်းတွေ ဖြစ်တဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းနဲ့ မန်ယူအသင်း တို့ဟာ ဒီကနေ့ မနက် အစောပိုင်းမှာ ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စုပွဲစဉ်တွေကို ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး အနိုင် ရလဒ်တွေ အသီးသီး ရရှိခဲ့ကြတာပဲ Continuous reading
(BREAKING!!!) လော်ရန်တေးကို (၂) နှစ်စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မန်ယူ
23/08/2019 Thu Yay 0
(BREAKING!!!) လော်ရန်တေးကို (၂) နှစ်စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူဖို့ သဘောတူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ မန်ယူ ပရီးမီးယားလိဂ်ထိပ်သီးကလပ်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာစပါးနဲ့စာချုပ်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီးနောက် အသင်းလက်မဲ့ဖြစ်နေတဲ့ လောရန်တေးကို (၂) နှစ်စာချုပ်နဲ့ ခေါ်ယူနိုင်ဖို့ သဘော တူညီမှု ရရှိ ခဲ့ပြီလုိ့ သိရပါတယ်။ မန်ယူအသင်းဟာ တိုက်စစ်အင်အားကိုဖြည့်တင်းနိုင်ဖို့အတွက် ပရီးမီးယား လိဂ်အတွေ့ အကြုံ Continuous reading
10/08/2019 Thu Yay 0
ဟန်ဂေရီနဲ့ပိုလန်ကစားသမားတွေကိုပြတ်ပြတ်သားသားအနိုင်ယူပြီး ကွာတားဖိုင်နယ်တက်သွားခဲ့တဲ့ သက်ထားသူဇာ ကြက်တောင်အားကစားကနေမြန်မာ့ကြက်တောင်လောကအတွက်အောင်မြင်မှုတွေယူပေးနေတာကတော့သက်ထားသူဇာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နိုင်ငံတစ်ကာပြိုင်ပွဲတွေမှာအောင်မြင်မှုဆုတံဆိပ်တွေကိုဆွတ်ခူးပေးပြီးကမ္ဘာ့အဆင့်၈၃နေရာမှာရပ်တည်နိုင်အောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ သူ က တော့ ခု မှာ လည်း ဂ ရိ နိုင် ငံ မှာ ကျင်း ပ နေ တဲ့ Hellas Open 2019 ကြက် တောင် Continuous reading
08/07/2019 KPST 0
ဘာစီလိုနာကို ပြန်မယ်လို့ အတိအလင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ
28/06/2019 KPST 0
ဘာစီလိုနာကို ပြန်မယ်လို့ အတိအလင်း ထုတ်ပြောလာတဲ့ ဂွါဒီယိုလာ လက်ရှိဘောလုံးလောကမှာ အကောင်းဆုံးနဲ့ အတော်ဆုံးနည်းပြတစ်ယောက်ကို ရွေးထုတ်ပြပါဆိုရင် မန်စီးတီးနည်းပြဂွါဒီယိုလာကိုပဲ ညွှန်းဆိုရမှာပါ။ ဂွါဒီယိုလာရဲ့ဘောလုံးအတွေးအခေါ်၊ ဂွါဒီယိုလာရဲ့နည်းဗျူဟာတွေက တကယ့်ကို အဆင့်အတန်းမြင့်မားပြီး လက်ဖျားခါချင်စရာလို့ဆိုရမှာပါ။ ဘာစီလိုနာ၊ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ လက်ရှိမန်စီးတီးအသင်းတို့မှာ ဂွါဒီယိုလာစွမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့အရာတွေက တကယ့်ကို အသိအမှတ်ပြုသင့်တဲ့အရာတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်သူ သက်သေပြနိုင်ဖို့အတွက်၊ Continuous reading
ပြိုင်ဘက်ဂိုးသမားကို အကြိမ်ကြိမ် အရူးလုပ်ပြသွားခဲ့တဲ့ ဆာလတ်ရဲ့ အမိုက်စားစကေး
20/06/2019 KPST 0
ပြိုင်ဘက်ဂိုးသမားကို အကြိမ်ကြိမ် အရူးလုပ်ပြသွားခဲ့တဲ့ ဆာလတ်ရဲ့ အမိုက်စားစကေး လီဗာပူးတိုက်စစ်ကစားသမား မိုဟာမတ်ဆာလတ်ကတော့ အံ့ခန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေကို အမြဲတမ်းပြသထားနိုင်ခဲ့တဲ့ ကစားသမားပဲဖြစ်ပါတယ်။ အမြဲတမ်း လှပသွင်းဂိုးတွေ၊ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာကောင်းတဲ့ အခိုက်အတန့်တွေကို ဆာလတ်က အမြဲတမ်း ဖန်တီးပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဆာလတ်ဟာ 2018 FIFA Puskas ဆုကို ဆွတ်ခူး ရရှိခဲ့တာလည်း Continuous reading
သက်လုံအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ဖိုးသော်
18/06/2019 KPST 0
သက်လုံအားနည်းတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် ဖြေရှင်းလိုက်တဲ့ မြန်မာ့ဂုဏ်ဆောင်ဖိုးသော် ပြီးခဲ့သော ရက်ပိုင်းက ရှန်ဟိုင်းမှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ One Championship သိုင်းပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲမှာ မြန်မာကစားသမား ဖိုးသော်ကပြိုင်ဘက် အင်ဒိုနီးရှားကစားသမားကို KO ဖြင့် အနိုင်ရရှိပြီး မြန်မာပြည်သို့ အနိုင်ရလဒ်နဲ့အတူ ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သူ့အနေနဲ့ ဒီပွဲမှာ ဘယ်လိုပြင်ဆင်ခဲ့ရပြီး အနိုင်ရလဒ်ရယူခဲ့လဲဆိုတာကို ပရိသတ်ကြီး Continuous reading
10/06/2019 KPST 0
Total Hits : 1238805